खाडीमा दु:ख पाएर फर्केका कृष्ण मल्लको कथा ! ऐले बाख्रा पालेर मा’लामाल,,,,, – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
खाडीमा दु:ख पाएर फर्केका कृष्ण मल्लको कथा ! ऐले बाख्रा पालेर मा’लामाल,,,,,
काठमाडौं ।आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम गरी म्याग्दीका कृष्ण मल्लले मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीका २९ वर्षीय मल्लले पैसा कमाउनकै लागि अष्ट्रेलिया जाने तयारीलाई पन्छाएर गाउँमा नै शुरु गरेको बाख्रापालनबाट अहिले वार्षिक रु १२ लाखसम्म आ’म्दानी गर्न सफल भएका छन् ।उनले करिब ६ वर्ष खाडी मुलुकमा विताएर तीन वर्ष अघि स्वदेश फर्किए।
Previous “जेनी कुँवरसँग फिल्म खेलेका नायक मिडीयामा,खोलीदिए,उनको मृ,त्युको वास्तविकता यस्तो सम्म भएको रहेछ- भिडियो सहित”
Next सुतेकै अवस्थामा किन गु’मा,उँछन् खा’डीमा नेपाली श्रमिकले ज्या’न ? यस्ता छन् कारणहरु,,,,,